Garsooraha dhex-dhexaadin doona kulanka Champions League ee Napoli iyo Liverpool oo la shaaciyey, xilli labada kooxood ay rikoor xun ka haystaan – Gool FM
Haaruun September 15, 2019
(Yurub) 15 Sebt 2019. Xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay garsooraha qaban doona kulanka adag ee ay kooxda Liverpool isbuucan booqanayso naadiga Napoli ee dalka Talyaaniga.
Kulankan ka tirsan heerka guruubyada Champions League oo isbuucan bilaabanaya ayaa kooxda Napoli iyo Reds waxa ay ku ballansan yihiin Talaadada garoonka Stadio San Paolo.
Kooxda uu hoggaamiyo macallin Carlo Ancelotti ee Napoli ayaa qaabili doona naadiga uu horkacayo macallin Jurgen Klopp ee Liverpool, iyadoo maanta la shaaciyey in garsooraha Jarmalka ah ee Felix Brych uu dhex-dhexaadin doono kulankaas, waxaana dhammaan UEFA ay kulankan u soo xilatay tababareyaal Jarmalka ka soo jeeda xitaa kuwa maamulka aaladda garsoorka caawisa ee VAR.
Ninka seeriga u qaban doona kulankan ee Felix Brych oo 44-sano jir ah ayaa kulanka ugu muhiimsan oo uu dhawaan qabtay uu ahaa final-kii Champions League ee sanadkii 2017-kii, markaasoo ay Real Madrid 4-1 kaga adkaatay Juventus.
Garsoore Brych ayaa rikoorka uu ka haysto kulammada uu soo dhex-dhexaadiyey ciyaaraha Liverpool ay tahay inuu shan kulan oo uu garsooray saddex ka mid ah la garaacay Reds, hal marka ay barbaro galeen midka kalena laga badiyey.
Yeelkeede, Kooxda Napoli ayaa rikoor ka xun midka Liverpool ku haysata garsoorahan Jarmalka ah, waxaana saddex kulan oo uu dhex-dhexaadiyey mar ay 4-2 kaga adkaatay Benfica, halka labada ciyaarood ee kale ay Chelsea iyo Manchester City guuldarrooyin kala kulantay.
Kooxda Juventus oo dhammaadka xilli ciyaareedkan doonaysa inay beeca xorta ah ku qaadato laacib ka tirsan Man United